Fanaraha-maso optika - Delta Engineering Belzika
Archive avy amin'ny sokajy "Fanaraha-maso optika"
Alatsinainy, 13 Oktobra 2014 by Delta Engineering
Rafitra rafitra fahitana ara-toekarena
Izy io dia rafitra fahitana ara-toekarena ifotony, natao hametrahana ny mpandray hafatra efa misy. Hamela anao handinika ny refy amin'ny tavoahangy, ny mainty hoditra, ny ovality, ny scrap, ny deformation de tavoahangy, ny loko sns.
Ny fakan-tsary miampy hatramin'ny 4 avy amin'ny vahaolana hafa, hatramin'ny 12MB, misy.
Published in Fanaraha-maso optika
Rafitra fahitana mandroso
Dia rafitra fahitana mandroso, natao hampidirina amin'ny tsipika famokarana. Hamela anao handinika ny refy amin'ny tavoahangy, ny mainty hoditra, ny ovality, ny scrap, ny deformation de tavoahangy, ny loko, sns.
Ny fakan-tsary miampy hatramin'ny 8 avy amin'ny vahaolana hafa, hatramin'ny 12MB, misy.
Rafitra fahitana ambony
Moa ve rafitra fijerena hafainganam-pandeha haingam-pandeha, natao hampidirina amin'ny famokarana tsipika Hamela anao handinika ny refy amin'ny tavoahangy, ny mainty hoditra, ny ovality, ny scrap, ny deformation de tavoahangy, sns
Rafitra fahitana mivoatra ho an'ny takelaka
Dia rafitra fahitana mandroso, natao hampidirina amin'ny tsipika famokarana. Famolavolana manokana ho an'ny fanaraha-maso jerry miaraka amin'ny volume hatramin'ny 10L.
Alatsinainy, 26 aprily 2021 by Sara
Fitaovana fanaraha-maso fakan-tsary, azo ampifandraisina amin'ny tester-na
Fitaovana fanaraha-maso fakan-tsary nataon'i INTRAVIS ho an'ny fizahana ambany, fizahana ambonin-tany, fizahana vozona… tavoahangy plastika Azo tratrarina amin'ny tester kaboka!